सिमल्ट विशेषज्ञ इस्लामाबाद र ndash; के खोज इन्जिन स्पाइडरहरू र तिनीहरूले एसईओलाई कसरी प्रभाव पार्छन्?
सिमल्ट विशेषज्ञ इस्लामाबाद र - के खोज इन्जिन स्पाइडरहरू र तिनीहरूले एसईओलाई कसरी प्रभाव पार्छन्?
विभिन्न वेबमास्टरहरू तिनीहरूको वेबसाइटहरूको खोजशब्द र वाक्यांशहरूको बारेमा चिन्तित छन् किनभने उनीहरूले खोज ईन्जिनियरिङ् s सबै खोजशब्दहरू वेबसाइटको र यहाँसम्म यसको रैंकिङको मूल्यांकन गर्न गिनछन्। सौभाग्य देखि, आधुनिक एसईओले धेरै चीजहरू समावेश गर्दछ र सबैकुञ्जी शब्दहरूको बारेमा होइन। वास्तवमा, त्यहाँ सैकड़ों खोज इन्जिन अनुकूलन कारकहरू छन् जुन वेबसाइटको खोजी ईन्जिनियरिङ् रैंकमा योगदान गर्दछ। मेटा विवरणहरू र इनबाउन्ड लिङ्कहरूमा शीर्षक ट्यागबाट सबै चीजहरू अझ राम्रो खोज ईन्जिनियरिङ्का लागि आवश्यक छ। वर्षहरु मा, गुगल, बिंग, र याहूले थाहा पाएको छ कि वेबसाइट कसरी प्रयोगकर्ता-अनुकूल छ वा होइन र यसको सामग्रीको गुणस्तर कसरी न्याय गर्ने भनेर निर्धारण गर्न सकिन्छ।
माइकल ब्राउन, ग्राहक सफलता प्रबंधक सेल्टल्ट , बताउँछ कि सबै Google र Bing लाई गर्न आवश्यक छ कि साइटको आफ्नो सूचकांक सन्दर्भ गर्नुहोस् र कुन वेब पृष्ठहरू गुणस्तरको सामग्री छन् र प्रदर्शन गर्न अधिकृत छन्। खोजी परिणामहरू।
सबै वेबमास्टरहरूलाई थाहा छ, खोजी इञ्जिन रेटिङ स्थिर छैन। संभावनाहरू हुन् कि तपाइँका प्रतियोगीहरू तपाईले भन्दा राम्रो कुञ्जी शब्दहरू र सामग्री परिमार्जन र परिमार्जन गर्नुहुनेछ, र Google मकवानहरूको काम पूरा हुन सक्दैन। यसैले तपाई नियमित रूपले आफ्नो सामग्री अद्यावधिक गर्न र विषयहरूको दायरा ढाक्नु पर्छ। यसले खोजी इञ्जिनहरू संकेत गर्दछ जुन वेबसाइट सक्रिय र स्वस्थ छ। Source - setting upasmall office network.
Google को क्रलरहरू र बटहरूको क्रोधबाट बच्नुहोस्
खोजी इन्जिन सजिलै ट्रिगर गर्न सकिन्छ जब एक समय थियो। वेब डेवलपर्स र वेबमास्टर्सले विभिन्न कालो टोपी एसईओ रणनीति प्रयोग गरे जुन साइटहरु को कार्बनिक सर्च परिणाम मा हेरफेर गर्न को लागी हेरफेर गर्न को लागी। तिनीहरूको खोजशब्द jamming सबैभन्दा प्रसिद्ध र व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको रणनीति हो, तर अहिले खोज इन्जिनहरू यस्तो व्यवहारको पहिचानमा राम्रो भएको छ। जब मकड़ीहरू लगातार विरूपणको रिपोर्ट गर्छ, यसले स्थायी प्रतिबंध वा अस्थायी सजावटको परिणाम हुनसक्छ। दण्ड तपाईंको कलाईमा पर्दा हो, र यसले तपाईंलाई आफ्नो वेबसाइटको रैंकिंग सुधार गर्न दिनेछैन। नतिजाको रूपमा, तपाईको साइटको ट्राफिकलाई कम गरिनेछ, किनभने खोजी इञ्जिनले यसलाई राम्रोसँग श्रेणीबद्ध गर्दैन।
यो सत्य हो कि सामग्री राजा हो, र यदि Google को मकवानहरूले देख्नुभयो कि तपाईंले प्रयोगकर्ताको अनुकूल र सामग्री-धनी साइट बनाउनुभएको छ, जुन आगन्तुकहरूको अपेक्षाहरूमा रहन सक्छ र उत्तम एसईओ प्रविधिहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिन्छ। साइट को रैंकिंग निश्चित रूप देखि सुधार हुनेछ। तपाईं हेरफेर प्रविधिहरु संग आफ्नो रैंकिंग को जोखिम कभी नहीं हुनु पर्छ यस को रूप मा अधिक आगंतुकों को आकर्षित गर्न को लागि तपाईं इच्छित परिणाम नहीं मिलेगा।
सफलता हासिल गर्न को लागि एक अन्य विधि र माथि पुग्छ
गुगल र अन्य खोज इञ्जिनहरू अरबौं डलरको लायक छन्, र यी साइटहरूले दानव दानको साथ सफलताको उचाई पुग्न सकेनन्। यो खोज इञ्जिन विशाल खोज परिणाम माथि विज्ञापन स्पेस बेचनमा संलग्न छ, र क्लाइन्ट्स र ब्रान्डहरू बिभिन्न खोज सर्तहरूमा बिरालो र कुत्तोंमा बोली। जब एक व्यक्तिले खोज क्वेरीमा प्रवेश गर्छ, पप-अप वा ब्यानर विज्ञापन स्वचालित रूपमा देखा पर्नेछ। यो साँच्चिकै राम्रो तरिका हो कि निर्णयकर्ता क्रलरहरू, बटहरू बाईपास गर्नुहोस्, र विज्ञापनदाताहरूले प्रायः प्राय: वेभसाइटका लागि भुक्तान गर्छन् जब उपयोगकर्ताहरूले विज्ञापनहरूमा क्लिक गर्दछन्।
त्यहाँ कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन कि तपाईंको साइट राम्रो स्थान प्राप्त हुनेछ किनकी सैकड़ों व्यापारिक वेबसाइटहरू शीर्ष स्थानमा छन्। सुरू गर्न उत्तम तरीका भनेको सबै वेबमास्टर के गरिरहनु हो भनेर बुझ्न हो। यसको साथ, तपाई सामग्री सुधार गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको वेबसाइटको सर्च इन्जिन नतिजा सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।